Orinasa mpamatsy herinaratra, mpamatsy - mpanamboatra singa miompana ao Shina
Na ny monoblock monoblock na ny valindrihana mitaingina rindrin'ny rindrina dia samy manana ny fahombiazany saingy manome toerana fametrahana hafa.
Ny sehatr'orinasa tafo dia tena mandeha tsara ary voafetra ny habaka anatiny ao amin'ny efitrano satria tsy mitana toerana ao anatiny izy.
Ny boaty evaporator dia noforonina tamin'ny alàlan'ny Polyurethane foaming ary manana toetra insulation tena tsara.
Fitaovana fampangatsiahana masoandro feno solo an'ny DC miaraka amin'ny fampisehoana manerantany AC / DC (AC 220V / 50Hz / 60Hz na fampidirana 310V DC), ny mpiorina dia mandray ny compresseur inverter Shanghai HIGHLY DC, ny mpamily matetika ary ny birao fanaraha-maso carel, valizy fanitarana carel Electronic, carel tsindry fanerena, sensor mari-pana carel, fanaraha-maso fampirantiana kristaly ranon-javatra, fitaratra fahitana Danfoss ary kojakoja marika malaza iraisam-pirenena hafa. Ny singa dia mahazo tahiry angovo 30% -50% raha oharina amin'ny herinaratra mitazona matetika matetika.
Ny rivotra-mangatsiaka dia toerana misy ny paompy hafanana miangona amin'ny rivotra izay ivon'ny rivotra (loharano) ary ny rano ho mpanelanelana amin'ny hafanana (hafanana). Amin'ny maha fitaovana fampidirana azy roa ho an'ny loharano mangatsiaka sy ny hafanana, ny paompy hafanana miorina amin'ny rivotra dia manafoana ireo ampahany fanampiny manampy toy ny tilikambo fihenan-tsakafo, paompin-drano, vinaingitra ary ireo rafitra fantsona mifanaraka amin'izany. Ny rafitra dia manana firafitra tsotra, mamonjy toerana fametrahana, fikolokoloana sy fitantanana mety, ary mitsitsy angovo, indrindra mety ho an'ireo faritra tsy misy loharanon-drano.